Sicirka caanaha oo la doonayo in la kordhiyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sicirka caanaha oo la doonayo in la kordhiyo
La daabacay fredag 12 juli 2013 kl 14.33
Sawirle: Jonas Neuman/P4 Gotland
Caanaleyda dalka waxaa u soo iftiimaya xilli wanaagsan kadib markii ay soo mareen laba sano oo adag. Faa’iidada caanaha laga helo ayaa hadda sare u soo kacday, Sidaasna waxaa soo werisey idaacadda Ekot.
- Xaalku hadda wuxuu u muuqdaa si ka wanaagsan sannadkii hore, ayuu Hans-Åke Hammarström, oo madax ka ah shirkadda LRF Mjölk.
Labadii sano oo ugu dambeysey waxaa hoos u dhacay sicirka caanaaha, taas oo lug ku leh isbeddelada xoogan oo ka dhaca suuqyada caanaha caalamka.
Haddase sicirkii kor ayuu u kacay taa oo ay sababtay baahida caanaha loo qabo oo dunida ku soo badatay, gaar ahaan dalalka Niyuu Siiland iyo Awstaraaliya.
Waxay ahayd kulaylihii hore kolkii sicirka caanaha lagu kordhiyey 30 öre litirkii. Haddana waxaa laga faa’iidaa 1.70 karoon litirkii.
- Waa wax fiican, laakiin weli lama gaarin meeshii aan dooneyney. Waxaan u baahan in sicirka caanaha la kordhiyo, ayuu yiri Hans-Åke Hammarström, waayo shirkadaha caanuhu waxay u baahan yihiin faa’iido waqti dheer si loo xasiliyo helitaanka caanaha..
Hans-Åke Hammarström wuxuu filayaa in sicirada caanuhu kor u kici doonaan. Waxaana sabab u ah dadka dunida oo soo kordhaya iyo dadyow badan oo Afrika iyo Aasiya ku nool oo dhaqaalohoodu soo wanaagsanaanayo, taasoo keeni doonta in baahida caanuhu cirka isku shareerto.